राजधानीमै कसले पड्कायो बम ? यस्तो भन्छन प्रहरी — Motivatenews.Com
राजधानीमै कसले पड्कायो बम ? यस्तो भन्छन प्रहरी
फागुन ११ काठमाडौँ – मानिसहरु आफ्नो निवासतर्फ फर्कन व्यस्त भइरहेको समयमा ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको मुख्य कार्यालय बाहिर शुक्रबार साँझ शक्तिशाली बम विस्फोट भयो । एनसेलको कार्यालयमा समेत क्षति पुग्ने गरी भएको यो विस्फोटमा फुटपाथमा हिँडिरहेका दुई महिला र एक पुरुष गम्भीर घाइते भए ।
आँगन स्विट्समा बम राखिएको खबर पाउने बित्तिकै पुगेको प्रहरीले तत्कालै नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली झिकायो । महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता डिएसपी होबिन्द्र बोगटीले बमको सूचना पाए लगत्तै सेनाको डिस्पोजल टोली आँगन मिठाइ पसलमा परिचालित भइसकेको बताए ।
एनसेलमा बम विस्फोट र कमल पोखरीको आँगन स्विट्समा कुकर बम भेटिएको सूचनासँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन निर्देशन दिएको छ । प्रहरीका अनुसार एनसेलमा बम पड्काउने समूहको अहिलेसम्म पहिचान हुन सकेको छैन । कमल पोखरीस्थित आँगन स्विट्समा पनि बम राख्नेको कुनै विवरण खुलेको छैन ।
विप्लव समूहले एक वर्ष अघि देशका विभिन्न स्थानमा रहेका एनसेलका तीन दर्जन बढी टावरमा बम विस्फोट र आगजनी गरेर क्षति गरेको थियो । उसले यसअघि एनसेलमा आक्रमण गर्दा घटना स्वीकारेको पर्चा पम्प्लेट छाड्ने गरेको थियो । तर एनसेलको काठमाडौँकै कार्यालयमा भएको आक्रमणमा कुनै समूहले पनि तत्काल घटना स्वीकारेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको संखुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा भएको बम विस्फोट र आगजनीको घटनालाई लिएर लगानी सम्मेलन भाँड्ने शक्ति सक्रिय भएको जनाउ दिएका थिए । अरुण तेस्रोमा भएको बम विस्फोट र आगजनीको घटनाको अहिलेसम्म कुनै समूहले जिम्मा लिएको छैन । त्यो आक्रमण शंकास्पद भन्दै सरकारले छानबिन पनि अघि बढाइरहेको छ ।